Ukufundwa Kwezinkanyezi | Septhemba 2021
Izibikezelo Zomshado Ngokuya Ngosuku Lakho Lokuzalwa
Lezi zibikezelo zisekelwe osukwini lwakho lokuzalwa, futhi lembula ngomshado wakho. Thola ukuthi iziphi izitha umshado ekubekele zona.
Ingabe Owakho Uzoba Umshado Wothando? Bheka Lokho Imigqa Yakho Yesundu Ebonisa Ngayo
Ukuthi uthando lwakho luzohlangabezana nendawo oluya kuyo noma cha. Ukuthi amaphupho akho okuguga ndawonye azofezeka noma cha. Noma ngabe uzozitholela umaqondana wakho, noma omunye uzokwenzela wena ... impendulo yayo yonke le mibuzo ilele emigqeni elele ngaphansi komunwe omncane wesandla sakho.
Yini Edalulwayo Eminweni Yakho Embulayo
Ubuwazi ukuthi izinsumpa eziseminwe yakho zisho lokhu? Thola incazelo efihlekile ngemuva kokuthi kusho ukuthini ngempela ukuba nalezi zimvukuzane eminweni yakho…
Uzoba Nezingane Ezingaki Ngokuya Ngemigqa Yakho Yesundu?
Wake wazibuza ukuthi zingaki izingane ongaba nazo empilweni yakho? Bheka ukuthi intende yesandla yembulani ngenani lezingane ongaba nazo!
Ngabe Igama Lakho Liqala Ngehlamvu 'A'?
Ngabe igama lakho liqala ngohlamvu A? Nazi izici zobuntu zabantu amagama abo aqala ngo-A.Funda ku.
Amakhambi Okunqoba Manglik Dosha Kundali Yakho
Ukuze siqonde ukuthi ukuqagela ngokuba uManglik kumayelana nani, kufanele siqale siqonde ukuthi iManglik dosha imayelana nani, imiphumela yayo nokulungisa
Imiphumela Nemithi Ye-Mercury Ebuthakathaka
Yini ukubaluleka kweplanethi yeMercury nemiphumela yayo empilweni yakho? Nakhu okuthunyelwe okuningiliziwe ngemiphumela namakhambi eplanethi ye-mercury ebuthakathaka (budh grah).
Izixazululo Eziphumelelayo Zezinkanyezi Ukuthola Imisebenzi Kahulumeni
Amathuba okungena emsebenzini kahulumeni angathuthukisa kaningi ngokulandela lezi zindlela ezilula neziwusizo zokufunda izinkanyezi. Qhubeka ufunde.
Imiphumela Ye-Brihaspati Eshadini Lokuzalwa Namakhambi Ahlanganisiwe
Ukuma kwamaplanethi eshadini lokuzalwa kungathinta impilo yonke yomuntu, kusho ukufundwa kwezinkanyezi. Nakhu ukuthi iBrihaspati iyithinta kanjani impilo yabantu nokuthi singaqinisa kanjani imiphumela yayo emihle.
Ukuhlaliswa Kwangaphandle Kubonwa Ngokufunda Ngezinkanyezi
Funda ukwazi ukuthi izindawo zokuhlala zakwamanye amazwe namathuba okuvakasha kwamanye amazwe angafundwa kanjani ngosizo lokufundwa kwezinkanyezi.
Uzoba Nezingane Ezingaki Ngokuya Ngophawu Lwakho Lwezinkanyezi
Uyavuma ukuthi imininingwane yokuthi zingaki izingane ozoba nazo ingasuselwa kusibonakaliso sakho se-zodiac? Hlola ukubikezela okuveza enanini lezingane obungaba nazo, okuncike kusibonakaliso sakho se-zodiac.
IPenumbral Eclipse 2020: Yazi Ukuthi Izokuthinta Kanjani Izimpawu Ezihlukile Zodiac
Njengoba sazi, ngomhla ka-5 Juni 2020, sizobona umcimbi wezinkanyezi ozoba ukusitheka kwenyanga. Lokhu kusitheka kwelanga kuzohlala isikhathi esingaphezu kwamahora amathathu. Ukuze wazi ukuthi yiziphi izindlela ezizothinta uphawu lwakho lwe-zodiac, funda le ndatshana.
Izinombolo Zenhlanhla Ezihlobene Nophawu Lwakho Lwezinkanyezi
Lezi zinombolo zisuselwa kusibonakaliso sakho se-zodiac futhi kukholelwa ukuthi zisebenzelana nawe. Bheka ukuthi iyiphi inombolo yakho yenhlanhla, njenge-zodiac yakho ngayinye.
Izinto Ezi-5 Wonke Ama-Mangliks Okufanele Azazi
Uma uyi-manglik kusho ukuthi une-mangal dosha noma ithonya leMars. Nazi ezinye izinto ama-mangliks angazenza ukunciphisa ama-mangal dosha.
Oshade Naye: Okunye Okungenayo Ngokufunda Ngezinkanyezi
Funda ukwazi ukuthi ungazi kanjani ngoshade naye ngosizo lokufundwa kwezinkanyezi.
Kusho Ukuthini Ukunqunywa Kokuphindwa Kokubili Kokubhula Kwezandla?
Uyazi ukuthi kusho ukuthini umugqa wesiphetho esiphindwe kabili ku-Palmistry? Nayi imininingwane, zihlole…
Izixazululo Zokufunda Ngezinkanyezi Ukuthola Umsebenzi Ngokushesha
Izixazululo ze-Astrological ukuthola umsebenzi maduze- Kunezindlela eziningi ezinhle nezilula zokufundwa kwezinkanyezi okungenziwa ukuze wenze kahle emsebenzini. Amanye amakhambi abhalwe lapha ukuze kuzuze abafundi.
Kusho Ukuthini Unxantathu Esentendeni Sakho?
Wake wacabanga ukuthi kusho ukuthini unxantathu entendeni yesandla sakho? Yebo, hlola imininingwane, njengoba amaqiniso ngokuma kukanxantathu ethakazelisa.
Ingabe Unemigqa Eminingi Kakhulu Esandleni Sakho?
Uyazi ukuthi imigqa ekhona entendeni yesandla sakho ingaveza okuningi ngempilo yakho nobuntu bakho? Nakhu okushiwo imigqa.
Ukubaluleka Kokugqoka Indandatho Yethusi, Njenge-Astrology
Funda ukuze wazi ukuthi yiziphi izinzuzo zokugqoka indandatho yethusi. Funda ukuze wazi ukuthi yiziphi izinzuzo zokugqoka indandatho yethusi ngokuya ngezinkanyezi.
imithombo emihle yamaprotheni kubantu abadla inyama
i-apula cider uviniga wobuso bombala
indlela ukubukeka zinde e Saree
ukuba manzi ngezingcaphuno zemvula
iqanda elibilisiwe elihhafu lilungele impilo
kanjani ukuthola emuva ngqo